အာဖကန်ကို လွှတ်ချခဲ့တဲ့အမေရိကန်တို့ပစ်မှတ် မြန်မာဖြစ်လာတော့မလား - AtoZ Daily
အာဖကန်ကို လွှတ်ချခဲ့တဲ့အမေရိကန်တို့ပစ်မှတ် မြန်မာဖြစ်လာတော့မလား
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို သုံးသပ်တဲ့အခါ တရုတ်ကမပါမဖြစ်ကို ရေးရပါတယ် အဲ့လိုရေးတဲ့အခါလဲ အကောင့်ကပိတ်ပါတယ် တရုတ်အကြောင်းမပါပဲ ရေးတဲ့အခါ မမှန်သလို မပြည့်စုံပြန်ပါဘူး
UNမှာ စကစကိုယ်စားလှယ်ကို တက်ခွင့်မပေးပဲ ဦးကျော်မိုးထွန်းသာတက်ရောက်ပြီး နိုဝင်ဘာလမှအတည်ပြုမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကြိုထွက်ခဲ့တဲ့ သတင်းတွေအတိုင်းဖြစ်လာနေတာ စကစအတွက်တော့ သံတမန်ရေးပိုင်း အကြီးအကျယ် အထိနာစေပါတယ်
ဒါတရုတ်သမ္မတ ကျင်ဖင့်နဲ့ USသမ္မတ ဘိုင်ဒန်တို့ဖုန်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီး ထွက်လာတဲ့သတင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ် တရုတ်ရဲ့နိုင်ငံတကာပေါ်ရပ်တည်ချက်တွေကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ ကိန်းသေတစ်ခုထားကစားတာမတွေ့ရပဲ အစဥ်သဖြင့် Move ဘက်ကို ဦးတည်ထားတာကို တွေ့ရပြန်တယ်
အာဖကန်ကို လွှတ်ချခဲ့တဲ့အမေရိကန်တို့ မြန်မာမှာလာအားစိုက်ပြီး ဆက်လူပ်နေရင် တရုတ်အတွက်ပိုခက်လာစေမလား ဒါမှမဟုတ် တရုတ်ကမြန်မာကိုဆက်လူပ်စေပြီး သူလောင်းကြေးပုံအောထားတဲ့ စကစ အနိုင်သေခြာမလားဆိုတာ တရုတ်တို့တွေးလာပုံလဲရပါတယ်
နဝတလက်ထက်က အာဏာသိမ်းတယ် ငြိမ်သွားတယ် အခု စကစ အာဏာသိမ်းတာ ၈လနီးပါးရှိပြီနိုင်ငံတကာက တော်လှန်ရေးဘက်ကို ဘာအကူအညီမှ မပါသေးတာတောင် စကစ မထိန်းနိုင်ဘူး ဒါဆို စကစ အနာဂတ်ဟာမရေရာတော့ဘူး
အသည်းအသန် ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်းနင်းနေတာလဲ စကစရဲ့ကျရူံးမူ့ကိုပြနေတာပါပဲဖိလေပိုကြွလာလေပါပဲ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်လာဖို့ကလဲ တဲတဲပဲလိုတော့တယ် အရမ်းလဲလွယ်ကူပါတယ်
PDFလက်ထဲလက်နက်ရောက်ရင် ပွဲကထိန်းမနိုင်တော့ပါဘူး နိုင်ငံတကာကလဲ အဲ့အခြေအနေမှာ Rule အရဝင်လာတော့မှာပါဒီအခါ မြန်မာပြည်အပြင် အထိနာမှာ တရုတ်ပါသူကမြန်မာပြည်ကို လက်လွှတ်ရပါလိမ့်မယ်
ဒီတော့ သူ့အနေနဲ့ စကစရဲ့အရည်အချင်းကို သိလာပြီဖြစ်သလို ပြည်သူရဲ့ စည်းလုံးတုန့်ပြန်မူ့အားတွေကြောင့် တရုတ်တို့ သူရဲ့မူဝါဒကို ပြန်ရွေ့လာပါတော့မယ်
ပြည်သူဘက်က ကံကောင်းတာက မင်းအောင်လိူင်လိုလူမျိုးအာဏာသိမ်းတာပါ ပါးစပ်ကပြောချင်ရာပြော ခုတစ်မျိုးတော်ကြာတစ်မျိုးပြော ရှေ့နောက်ကမညီ တိကျတဲ့ plan မရှိပဲ အခြေအနေပေါ်ကြည့်ပြီး နေရာတကာ သေနတ်နဲ့ပဲ ဖြေရှင်းနေသူ အတွက်တော့ မကြာခင် တရုတ်ကသူကိုယ်တိုင်ဆွဲချလာမလား
အဲ့အတွက်မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး ပန်းတိုင် ရောက်တော့မလားဤခရီး နီးပြီလား ဆိုတာ…..စောင့်ကြည့်ကြရအောင်လားဗျာ….
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို သုံးသပ္တဲ့အခါ တ႐ုတ္ကမပါမျဖစ္ကို ေရးရပါတယ္ အဲ့လိုေရးတဲ့အခါလဲ အေကာင့္ကပိတ္ပါတယ္ တ႐ုတ္အေၾကာင္းမပါပဲ ေရးတဲ့အခါ မမွန္သလို မျပည့္စုံျပန္ပါဘူး
UNမွာ စကစကိုယ္စားလွယ္ကို တက္ခြင့္မေပးပဲ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသာတက္ေရာက္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလမွအတည္ျပဳမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ ႀကိဳထြက္ခဲ့တဲ့ သတင္းေတြအတိုင္းျဖစ္လာေနတာ စကစအတြက္ေတာ့ သံတမန္ေရးပိုင္း အႀကီးအက်ယ္ အထိနာေစပါတယ္
ဒါတ႐ုတ္သမၼတ က်င္ဖင့္နဲ႔ USသမၼတ ဘိုင္ဒန္တို႔ဖုန္းနဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး ထြက္လာတဲ့သတင္းလဲ ျဖစ္ပါတယ္ တ႐ုတ္ရဲ႕ႏိုင္ငံတကာေပၚရပ္တည္ခ်က္ေတြကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ကိန္းေသတစ္ခုထားကစားတာမေတြ႕ရပဲ အစဥ္သျဖင့္ Move ဘက္ကို ဦးတည္ထားတာကို ေတြ႕ရျပန္တယ္
အာဖကန္ကို လႊတ္ခ်ခဲ့တဲ့အေမရိကန္တို႔ ျမန္မာမွာလာအားစိုက္ၿပီး ဆက္လူပ္ေနရင္ တ႐ုတ္အတြက္ပိုခက္လာေစမလား ဒါမွမဟုတ္ တ႐ုတ္ကျမန္မာကိုဆက္လူပ္ေစၿပီး သူေလာင္းေၾကးပုံေအာထားတဲ့ စကစ အႏိုင္ေသျခာမလားဆိုတာ တ႐ုတ္တို႔ေတြးလာပုံလဲရပါတယ္
နဝတလက္ထက္က အာဏာသိမ္းတယ္ ၿငိမ္သြားတယ္ အခု စကစ အာဏာသိမ္းတာ ၈လနီးပါးရွိၿပီႏိုင္ငံတကာက ေတာ္လွန္ေရးဘက္ကို ဘာအကူအညီမွ မပါေသးတာေတာင္ စကစ မထိန္းႏိုင္ဘူး ဒါဆို စကစ အနာဂတ္ဟာမေရရာေတာ့ဘူး
အသည္းအသန္ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္းနင္းေနတာလဲ စကစရဲ႕က်႐ူံးမူ႔ကိုျပေနတာပါပဲဖိေလပိုႂကြလာေလပါပဲ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ျဖစ္လာဖို႔ကလဲ တဲတဲပဲလိုေတာ့တယ္ အရမ္းလဲလြယ္ကူပါတယ္
PDFလက္ထဲလက္နက္ေရာက္ရင္ ပြဲကထိန္းမႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ႏိုင္ငံတကာကလဲ အဲ့အေျခအေနမွာ Rule အရဝင္လာေတာ့မွာပါဒီအခါ ျမန္မာျပည္အျပင္ အထိနာမွာ တ႐ုတ္ပါသူကျမန္မာျပည္ကို လက္လႊတ္ရပါလိမ့္မယ္
ဒီေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ စကစရဲ႕အရည္အခ်င္းကို သိလာၿပီျဖစ္သလို ျပည္သူရဲ႕ စည္းလုံးတုန္႔ျပန္မူ႔အားေတြေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔ သူရဲ႕မူဝါဒကို ျပန္ေ႐ြ႕လာပါေတာ့မယ္
ျပည္သူဘက္က ကံေကာင္းတာက မင္းေအာင္လိူင္လိုလူမ်ိဳးအာဏာသိမ္းတာပါ ပါးစပ္ကေျပာခ်င္ရာေျပာ ခုတစ္မ်ိဳးေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳးေျပာ ေရွ႕ေနာက္ကမညီ တိက်တဲ့ plan မရွိပဲ အေျခအေနေပၚၾကည့္ၿပီး ေနရာတကာ ေသနတ္နဲ႔ပဲ ေျဖရွင္းေနသူ အတြက္ေတာ့ မၾကာခင္ တ႐ုတ္ကသူကိုယ္တိုင္ဆြဲခ်လာမလား
အဲ့အတြက္ျမန္မာ့ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ပန္းတိုင္ ေရာက္ေတာ့မလားဤခရီး နီးၿပီလား ဆိုတာ…..ေစာင့္ၾကည့္ၾကရေအာင္လားဗ်ာ….
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို UN အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပြော
တံတာအမည်တစ်ခုပြောင်းနိူင်ခဲ့သည့် အာဏသိမ်းစစ်ခေါင်ဆောင်မှ ၄လကျော်မှာ တိုင်းပြည်တိုးတတ်ပြောင်းလဲလာကြောင်း ပြော